April 17, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 2
Wasaaradda Tamarta, Biyaha & Macdanta ee dawladda Puntland ayaa soo saartay war rasmi ah oo ku saabsan in aan cidna Puntland u matali karin shirarka loga hadlayo arrimaha Shidaalka iyo Kheyraadka Soomaaliya, aysana qeyb ka aheyn shirka ka socda dalka Jabuuti ee arrimahaas looga hadlayo.
Puntland waxay cadeysay in ay u madax banaan tahay arrimaha Shidaalkeda iyo ka hadalkooda, tan iyo inta laga dhameystirayo Qabyo Qoraalka Dastuurka KMG ah ee Soomaaliya, horeyna ay sidaas heshiis ugu ahaayeen dawladda Puntland iyo Dawladda Faderaalka ee Muqdisho.
Asc Wr Wb I agreed with Puntland Government, Adeer Shidaalka Puntland shacabka Puntland ayaa iska leh, Puntland wax faaida leh ee ka hesho majirta Dawlada federaalka xatta wax kale iska daaye 25% ee Puntland ku laheyd DFS waxaa xaday Hawiye iyo Farmaajo. Marka Farmaajo Muqdishu iska dhex hurud adeer shidaal aad Muqdishu ku dhisato, isaaq af cagaar siiso Allah hakuu Sahlo. Puntland Oilkeeda awoowyadeena inoo ilaaliyey dhulkana, shuqul aan ku leenahay maleh Hawiye iyo isaaq, kii nasoo werarana waa naqaanaa sidaan ukarbaashno.
Puntland haisku tashato meeha mooryaan ayaa isku heysato.
Puntland isku ma heli karto labada ah in ay Federaalka Soomaaliya ka mid ahaanshaheeda sheegato iyo in ay mar ba ka boodsanaato arrimaha heerka qaran loo qorsheynayo. Puntland ama federaalka ayay ka tirsan tahay oo ay cadka la goosanaysaa, aan ahayn waa in ay iyadu sameysato oo ay qeexato mansabka ay hannaanka federaalka ku leedahay. Haddii kale waa in ay Woqooyi Galbeed sidiisa u muujiso mawqif cad ee ah in aanay Soomaaliya ka tirsanayn oo ay ka gooni tahay.
Anigu sanado dhan baan ku doodayay in ay Puntland si dastuuri ah toos ugu qaadato martabaddeeda taariikhiga ah ee Saldanadeed oo ay noqoto geyi boqortooyo ee se federaalka ka tirsan. Waxaa uu mansabkaasu Puntland guddoonsiin lahaa xuquuqda u gaarka ah ee aanay dalka intiisa kale la wadaagin, sida xorriyaddeeda ganacsi iyo dhaqaaleed ee ay iyada u straatijisan. Laakiin Xamar ayaynu toos u hoos galaynaa oo waxii go’aamo heer federaal ahna la wadaagi mayno mawqif macquul ah ma aha.
Mawqifkan yacyacoodka ahi Puntland iyo Soomaaliya midna maslaxadi ugu ma jirto xaqiiqdii. Puntland way mudan tahay oo ay heli kartaa mansab Saldanadeed ee ay kaga tirsan tahay federaalka guud ee dalka. Waxaa loo yaqaannaa “Duchy” oo adduunyada meelo badan bay taasu qumaati uga shaqeysaa.